XOG:- Kharashaadka ay dowladda ku bixisay dacwadda la xiriirta muranka Badda ee kala dhaxeeya Kenya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Kharashaadka ay dowladda ku bixisay dacwadda la xiriirta muranka Badda ee kala dhaxeeya Kenya
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay rajo wanaagsan ka qabto in lagu guuleysan doono dacwadda la xiriirta xuduudda badda Soomaaliya ee kala dhaxeeysa dowladda Kenya, taas oo maanta dacwadeeda ka bilaabatay magaalada Hague ee dalka Holland.
Sarkaal ka tirsan xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya oo diiday inaynu magaciisa shaacino ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyay in dowladda Soomaaliya ay rajo aad u weyn ka qabto in lagu guuleysan doono dacwaddaasi, isagoona dhinaca kale tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay dacwadaasi lacag badan ku bixisay.
Sidoo kale, sarkaalkaasi ayaa inoo xaqiijiyay in lacagta ilaa iyo haatan ay dowladda Soomaaliya dacwadaasi ku bixisay ay gaareyso ilaa $ 4,200,000 (Afar milyan iyo laba boqol kun doolarka Mareykanka Ah).
“Dowladda Soomaaliya waxay rajo weyn ka qabtaa in arrinta dacwadda Badda ee kala dhaxeeysa Kenya ay ku guuleysan doonto, waxaana kharash ahaan markii la xisaabiyo dacwadaasi dowladda kaga baxday ilaa 4 milyan iyo 2 boqol oo kun ee doollarka Mareykanka ah, ilaa waqtigii ay dacwadaasi soo bilaabay ilaa waqtigaan la joogo” Sidaasi waxaa yiri sarkaal ka tirsan xarunta madaxtooyadda oo magaciisa diiday inaynu warbaahinta u isticmaalno.
Dhinaca kale, hadalka sarkaalkaan inoo xog-warammay ayaa kusoo beegmaya xilli ergadda Soomaalida ee loo xil saaray dacwadaasi ay maxkamadda ICJ ee ka bilaabatay magaalada Hague ee dalka Holland ku wehliyaan qareeno caalami iyo sidoo kale la-taliyayaal Soomaali ah.
Waxaa qareenadda caalamiga ee difacaayo Badda Soomaaliya ka mid ah, Paul Reichler oo u dhashay dalka Mareykanka, iyo sidoo kale Allain Pellet oo isna u dhashay dalka Faransiiska.
Dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa iyadana soo kireysatay qareeno caalami ah oo difaaca dacwadda ay ku sheeganayso lahaanshiyaha Badda Soomaaliya, waxaana ka mid ah qareenadaasi, Kariim Axmed Khaan oo u dhashay Britain, Payam Akhavan oo u dhashay Maraykanka, Mathias Forteau oo u dhashay Faransiiska iyo Amy Sandares oo isna u dhashay dalka Britain.
Ugu dambeyntii, maanta oo ahayd maalintii koowaad oo ay maxkamadda ICJ ku dhageysanaysay dacwadda dowladda Kenya ee dhinaca Badda ah, ayaa hadane waxaa maalinta berri la sugayaa in dhinaca dowladda Soomaaliya ay ka jawaabto wixii ay maanta Kenya maxkamadda ka sheegtay.